ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အမျိုးသားတန်းတူရေးရှိလာစေဖို့ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချခြင်း ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့ အမြိုးသားတနျးတူရေးရှိလာစဖေို့ ဗဟိုခြုပျကိုငျမှု လြှော့ခခြွငျး – Federal Journal
ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အမျိုးသားတန်းတူရေးရှိလာစေဖို့ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချခြင်း ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့ အမြိုးသားတနျးတူရေးရှိလာစဖေို့ ဗဟိုခြုပျကိုငျမှု လြှော့ခခြွငျး
ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတာ သီအိုရီသဘောတရားအရ ဗဟိုနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေအကြား အာဏာခွဲဝေ ကျင့်သုံးခြင်း၊ Power sharing နဲ့အတူ Revenue sharing, Resource sharing တွေကို အညီအမျှခွဲဝေသုံးစွဲကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တိုင်းရင်းသားတွေမျှော်မှန်းထားကြတဲ့ ကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုတာ ဒီမိုကရေစီအရ ရွေးကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက ကိုယ့်ဒေသမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာရှိလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်းဆိုရင်လည်း ရှမ်းအလျောက်၊ ရခိုင်ဆိုရင်လည်း ရခိုင်အလျောက် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက (Resource) သဃံဇာတ ခွဲဝေသုံးစွဲနိုင်အောင် ဗဟိုအစိုးရနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေအကြား လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ အတိအကျသတ်မှတ်ထားဖို့ကို တိုင်းရင်းသားတွေ က လိုလားနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားတွေထင်မှတ်နေကြတာက အရင်ကလည်းဗဟိုက ချုပ်ကိုင်တယ်။ အခုလည်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအရ ဗဟိုကချုပ်ကိုင်ထားတော့ ကိုယ့်ဒေသကထွက်တဲ့သဃံဇာတနဲ့ ကိုယ့်စာပေယဉ်ကျေးမှုကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ တိုင်းရင်းသားတွေက ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အိမ်မက်ကို မက်လာကြတယ်။ ၂၀၁၅-ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ရခိုင်နဲ့ရှမ်းဒေသတွေမှာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ချုပ်တွေကို ဗဟိုအစိုးရက တိုက်ရိုက်ခန့်ထားခဲ့ကြတော့ တိုင်းရင်းသားတွေက Power Sharing ကို ဗဟိုအစိုးရနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့တို့အကြား သဘောတူညီမှုရရှိဖို့အတွက် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအတိုင်းသွားဖို့ လိုလားနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေ စီနိုင်ငံရေးစနစ်ကို အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ဖို့ အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိနေပါရမှာဖြစ်သလို ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စနစ်ထွန်းကားဖို့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို မဖြစ်မနေပြင်ကိုပြင်ရပါမယ်။
အခုချိန်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေတောင်းဆိုလာကြတာက ဖက်ဒရယ်စနစ်ရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ ဗဟိုအစိုးရချုပ်ကိုင်မှု အာဏာကို လျှော့ချပြီး ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေက သဃံဇာတများအပေါ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခွင့် အပြည့်အဝအာဏာခွဲဝေမှု ထူထောင်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟိုအစိုးရနဲ့ ဒေသန္တရအစိုးရအကြား အာဏာခွဲဝေရေးကိုတိုင်းရင်းသားတွေက လိုချင်နေကြလို့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို လိုချင်လာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ဖက်ဒရယ်စနစ်ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားလာဖို့ သည်းခံမှုက အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ကျမစိုးမိုးရေးကလည်း အခြေခံအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။
တစ်နေ့ “ဆရာတော်ဦးဥတ္တမဟာ ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ ဦးဥတ္တမနေ့မှာ ဆရာတော်ကို ပူဇော်ခွင့်ရဖို့ ကျောင်းတွေဘာ ကြောင့်မပိတ်တာလဲ ဖေကြီး” ဆိုပြီး ၂၀၁၉-ခုနှစ် (၈၀) ပြည့် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမနေ့ ကလေးတန်း (Grade-5) ကျောင်းတက်နေ တဲ့ သမီးလေးက မေးဖူးပါတယ်။ ဆရာတော်ဟာ လူမျိုးစွဲ၊ ဒေသစွဲမရှိဘဲ နက်ရှိုင်းသောပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်ဖြင့် လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းခဲ့သူဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ကျေးရွာများအထိ နိုင်ငံရေးမျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ကျေးဇူးကြောင့် ဒို့ဗမာ အစည်းအရုံးတွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရလို့ ဦးဥတ္တမနေ့မှာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကျောင်းမပိတ်တောင်မှ သမီးငယ်တို့လို ရခိုင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ ဆရာတော်ရဲ့ကျေးဇူးတရားသိတတ်လာစေဖို့ ပူဇော်လို့ရအောင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အခြေခံ ပညာကျောင်းတွေ ပိတ်သင့်ပါတယ်။ အခုက သည်လိုမဟုတ် စစ်တွေမြို့ ဆရာတော်ပန်းခြံရှိ ဦးဥတ္တမခန်းမမှာ ဦးဥတ္တမနေ့ပြုလုပ် ကျင်းပဖို့ ပွဲဦးဆောင်ကျင်းပသူတွေက ငြိမ်းစုစီတင်ခဲ့ကြရကြောင်း ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။
စောဘဦးကြီးအမှတ်တရ ကရင်အာဇာနည်နေ့ကို ကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်တာတွေ၊ ကရင်အာဇာနည် စောဘဦးကြီးရုပ်တုကို စိုက်ထူခွင့်မရခဲ့ကြတာတွေ၊ လွိုင်ကော်မှာ ကယားပြည်သူတွေမလိုချင်ခဲ့ဘဲ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုစိုက်ထူဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာတွေနဲ့ ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ ဒဏ္ဍာရီတွေများစွာရှိနေတဲ့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာတွေက လူမျိုးကြီးဝါဒကို အခုချိန်ထိ စွဲကိုင်နေကြတုန်းလို့ တိုင်းရင်းသားတွေကထင်မှတ်နေကြပြီး သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတော့ လျစ်လျူရှုခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ထင်မြင်နေကြပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အန္တိမရည်မှန်းချက်က အနာဂတ်မှာ ဖြစ်ထွန်းလာမယ့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဟာ တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့လိုလားချက်၊ မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခု က ခေတ်အဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတဲ့ အစိုးရအနေဖြင့် ပင်လုံကတိကဝတ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြလို့ တိုင်းရင်းသားတွေက ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို လိုလားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလွှမ်းမိုးထားတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်က ဗဟိုမှာပဲ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီးနိုင်ဖို့ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်သာ အမှန်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ တိုင်းရင်းသားတွေက ယုံကြည်ချက်ထားလာနေကြခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားတွေက ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် သာ အခြေခံအကျဆုံးလို့ ရှုမြင်ထားကြသလို တစ်ဖက်ကလည်း ဖက်ဒရယ်ဆိုတာ တိုင်းပြည်ပြိုကွဲရေးစကားလုံးအဖြစ် မှတ်ယူထားပြီး လူမျိုးကြီးဝါဒကို အသေဆုတ်ကိုင်ထားလို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြာဆုံးပြည်တွင်းစစ် နှစ်ပေါင်း(၇၀)ကျော် ရှိလာနေရ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုချိန်မှာ NLD အစိုးရအနေဖြင့် အစိုးရ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထု စိုက်ထူဖို့ ကြိုးစားနေတာထက် အမျိုးသားတန်းတူရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကို အခြေခံတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက်ရေးကိုသာ အမြန်ဆုံးအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်တိုင်းမှာ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်မှာ ဥပဒေပြုခြင်း၊ မြို့တော်ဝန်နဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ချုပ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းကို ပြည်နယ်အစိုးရက လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ တူညီသောတန်းတူအခွင့်အရေးများကို အာမခံတဲ့ ဗဟို ချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချပြီး ပြည်နယ်အစိုးရများအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ ပိုမိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ တိုင်းရင်းသားတွေလိုချင်နေကြတဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုချိန်အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ဆောင်နေချိန်ကာလမှာ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုတွေစိုက်ထူဖို့ ကြိုးစားနေခြင်းဟာ အကျိုးထက်အပြစ်သာများနိုင်သလို အခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဗမာတိုင်းရင်းသားများအကြား မလိုလားအပ်တဲ့လူမျိုးရေးဆန်တဲ့ အမုန်းပွားမှုတွေသာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တိုင်းရင်းသားတွေက အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရဖို့ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို စွဲကိုင်ခဲ့ကြရာမှ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးမြန်မာပြည်တွင်းစစ်အဖြစ် နာမည်ကြီးလာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကို ဗဟိုက ချုပ်ကိုင်ထားပြီး တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်မရှိတာ လည်း ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။
ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဖြစ်လာဖို့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ကြရပါမယ်။ ကျောင်းသုံးပြဋ္ဌာန်းချက်စာအုပ်တွေမှာ အေဒီ ၁၀၄၄-ခုနှစ် ပုဂံသမိုင်းထဲက အနော်ရထာ၊ ကျန်စစ်သားမင်းအကြောင်းတွေ သင်ကြားနေသလို အေဒီ ၁၄၃၀-ခုနှစ်မှာ မြောက်ဦးမြို့ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ မြောက်ဦးခေတ်က ရခိုင်ဘုရင် မင်းစောမွန်၊ မင်းဗာဘုရင်အကြောင်းနဲ့ မွန်ဘုရင်မနုဟာမင်း အကြောင်းတွေကိုလည်း ကျောင်းသုံးပြဋ္ဌာန်းချက်စာအုပ်တွေမှာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေသင်ကြားနိုင်ဖို့ ပြဋ္ဌာန်းပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှလည်းဒီမိုကရေစီ အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံ ချက်အပြည့်အဝရှိပြီး ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အခြေခံသည့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတိတ်သမိုင်းကို မလိုချင်သရွေ့ ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အခြားတိုင်းရင်းသားတွေအကြားမှာ မုန်းတီးမှုတွေ ဆက်ရှိနေအုံးမှာဖြစ်လို့ ဒီမိုကရေစီဘောင်ကျဉ်းလာရင် စစ်ဘောင်က ဆက်လက်ကျယ်နေအုံးမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့စကားလုံးကို အဓိပ္ပာယ်ဖော်ဆောင်နေကြရာမှာ မတူကြဘူးဖြစ်နေတယ်။ လက်နက်စွဲ ကိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေက နယ်ချဲ့၊ ဖက်ဆစ်ရန်ကို တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံက တိုက်ယူခဲ့လို့ လွတ်လပ်ရေးရပြီးမှ ငါတို့အား လုံးပါဝင်ပြီး ပြည်ထောင်စုဖြစ်လာတယ်လို့ ယုံကြည်နေကြပေမဲ့ ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေက မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ ပုဂံခေတ်ကတည်း က ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြတယ်။ ဒါကလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါ။ တိုင်းရင်းသားတွေမက်ခဲ့ ကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအိမ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ ပုဂံခေတ်ကို လိုအပ်သည်ထက် အမွမ်းမတင်သင့်။
ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကို ဖော်ဆောင်ဖို့ကြန့်ကြာနေခဲ့လို့ ဘယ်သူမှအနိုင်အရှုံးမရှိ မဆုံးနိုင်တဲ့ ပဋိပက္ခသံသ ရာမှာ ကျင်လည်နေကြရတာကို အရှည်လျားဆုံးမြန်မာပြည်တွင်းစစ်တိုက်ပွဲတွေက သက်သေပြလျက်ရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ပြည်တွင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကို နိုင်ငံရေးစားပွဲဝိုင်းမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေ ရှာကြခြင်းဖြင့် နှစ်ဘက်ပြေလည်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ချောမွေ့လာရမည်ဖြစ်ရာ ပြည်ထောင်စုအကျိုး၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအကျိုးဖြစ်မယ့် ဘုံသဘောထားကို ခံယူထားကြရမှာလည်းဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို စစ်ရေးဖြင့်မဖြေရှင်းကြဘဲ နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းရမယ့် နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေးမှုအသစ်ကို တည်ဆောက်နိုင်ကြမှသာ တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေးရရှိကြမယ့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု တစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
NCA လက်မှတ်ထိုးပြီး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရုံနဲ့လည်း ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖြစ်မလာနိုင်သေးပါ။ တရားမျှတမှုက အခြေခံနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရားမျှတမှု၊ တန်းတူအခွင့်အရေးဆိုတာ ဖက်ဒရယ်ဖြစ်လို့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကို တိုင်းရင်းသား တွေက များစွာလိုချင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေလိုချင်နေကြတဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကို မသိကျိုးကျွံပြုထားသမျှ ကာလပတ်လုံး ပြည်တွင်းစစ်ဘယ်တော့မှ ချုပ်ငြိမ်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုလိုပြည်တွင်းစစ်ဘာကြောင့် ကြန့်ကြာနေရသလဲဆိုရင် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု အိမ်မက်ဆန္ဒကို အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရအဆက်ဆက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှု များစွာအားနည်းနေခဲ့လို့ပဲ ဆိုရပါမယ်။ လွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး (၄၅)ဦးကော်မတီမှာ ရခိုင်ကလွှတ်တော်အမတ်တွေ နှုတ်ထွက်လိုက်ကြခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်အမျိုးသားပါတီက “စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအခန်းကဏ္ဍမှာ ပီပြင်စွာပါဝင်နိုင်ရန် အခြေအနေ မရှိတော့တဲ့အပြင် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုစနစ်ကျင့်သုံးပြီး လက်ရှိအာဏာရပါတီရဲ့ အာဏာာတည်မြဲရေးကိုသာ ရည်ရွယ်နေကြောင်း တွေ့မြင်နေရလို့” ဆိုပြီး ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာကို ဖတ်လိုက်ရပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ ကြိုးစားလာနေကြခြင်းဟာ အဆိုးထဲက အကောင်းတစ်ခုလို့ ဆိုရပါမယ်။
ကမ္ဘာကြီးရွာတစ်ရွာဖြစ်လာနေချိန်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေက ခေတ်ကိုလိုက်ပြီး ပြောင်းချင်လာကြပါတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးတွေ ရဲ့အမြင်မှာ ၁၈၈၅-ခုနှစ်ကတည်းက သူ့ကျွန်ဖြစ်ခဲ့ရတာ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုစနစ်က ရှိသေးလို့ အခုအချိန်ထိ ငါတို့ တန်းတူအခွင့်အရေး မရသေး၊ ကျွန်နဲ့မခြား။ ဒါကြောင့် ငါတို့လက်နက်စွဲကိုင်မှ ရတော့မယ်ဆိုပြီး ရခိုင်လူငယ်တွေ သေနတ်ကိုင် တာကို ခုံမင်လာနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားတွေအနေဖြင့် ဖက်ဒရယ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို အစဉ်တစိုက်တောင်းဆိုလာခဲ့ကြတာ တွေ့မြင်နေရပါ တယ်။ အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ တန်းတူညီမျှ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိလာဖို့ AA မှ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်က “ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသထက် မညံ့တဲ့ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို လိုချင်တယ်” လို့ ဧရာဝတီသတင်းဌာနနဲ့ အင်တာဗျူးလုပ်ချိန်မှာ ဖြေကြားသွားတာတွေ့လိုက်ရပါသေးတယ်။
အရင်ကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ခေတ်အဆက်ဆက် ရခိုင့်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို တောင်းဆိုခဲ့ကြတာ တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၆၃-ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးကောင်စီက ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်း ရေးပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ တောတွင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့ရာ ရဲနီကျော်ဇံရွှီက ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တောင်းဆိုခဲ့တာကို ကြားသိရပါတယ်။ “ရှမ်းမူ” မပေါ်ခင် ဦးထွန်းမြင့်ရဲ့စာတမ်းမှာလည်း ခွဲထွက်လိုက ခွဲထွက်ခွင့်ဆိုတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါရှိနေတာကို သတိပြုမိပါတယ်။
အမှန်က တိုင်းရင်းသားတွေ လိုချင်နေကြတဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဆိုတာ ခွဲထွက်ရေးမဟုတ်၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားတဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရပါတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး မဆွေးနွေးနိုင်သမျှ TNLA မှ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဘုန်းကျော် ပြောသလို “မြန်မာ့ပြည်တွင်းစစ် နှစ်တရာမက မပြီးဆုံးသော သံသရာ” ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့်ပြောရပါလျှင် ပြည်တွင်းစစ်ချုပ်ငြိမ်းသွားဖို့ တိုင်းရင်းသားတွေ အစဉ်တစိုက်တောင်းဆိုလာကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ကို ဦးတည်ပြီး ခိုင်ခိုင်မာမာ အကောင်အထည်ဖော်ကြဖို့ လိုအပ်နေသလို တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်း အဖြစ်အပျက်တွေကို အသိအမှတ်ပြု တန်ဖိုးထားပေးရပါမယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ၊ စာပွဲဝိုင်းက တစ်ဆင့် အမျိုးသားတန်းတူရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ အာဏာခွဲဝေမှုအတွက် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချနိုင်မှသာ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်အောင် ထူထောင်မယ်ဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံကို မပြင်မဖြစ် ကြိုးစားကြရပါမယ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ ပြင်ဆင်မယ့် ပုဒ်မတွေကလည်း တိုင်းရင်းသားအားလုံးလက်ခံနိုင်မယ့် ပုဒ်မတွေ ထည့်သွင်းလာနိုင်ပါစေလို့ မျှော်လင့်ရင်း . . . ။
ဒီမိုကရစေီဖကျဒရယျပွညျထောငျစုဆိုတာ သီအိုရီသဘောတရားအရ ဗဟိုနဲ့ပွညျနယျအစိုးရတှအေကွား အာဏာခှဲဝေ ကငျြ့သုံးခွငျး၊ Power sharing နဲ့အတူ Revenue sharing, Resource sharing တှကေို အညီအမြှခှဲဝသေုံးစှဲကွခွငျးဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့တိုငျးရငျးသားတှမြှေျောမှနျးထားကွတဲ့ ကိုယျ့ကံကွမ်မာကိုယျဖနျတီးခှငျ့၊ ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့ဆိုတာ ဒီမိုကရစေီအရ ရှေးကောကျတငျမွောကျထားတဲ့ တိုငျးရငျးသားခေါငျးဆောငျတှကေ ကိုယျ့ဒသေမှာ အုပျခြုပျရေးအာဏာရှိလာဖို့ဖွဈပါတယျ။ ရှမျးဆိုရငျလညျး ရှမျးအလြောကျ၊ ရခိုငျဆိုရငျလညျး ရခိုငျအလြောကျ တိုငျးရငျးသားခေါငျးဆောငျတှကေ (Resource) သဃံဇာတ ခှဲဝသေုံးစှဲနိုငျအောငျ ဗဟိုအစိုးရနဲ့ပွညျနယျအစိုးရတှအေကွား လုပျပိုငျခှငျ့တှေ အတိအကသြတျမှတျထားဖို့ကို တိုငျးရငျးသားတှေ က လိုလားနကွေခွငျးဖွဈပါတယျ။
တိုငျးရငျးသားတှထေငျမှတျနကွေတာက အရငျကလညျးဗဟိုက ခြုပျကိုငျတယျ။ အခုလညျး ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံဥပဒအေရ ဗဟိုကခြုပျကိုငျထားတော့ ကိုယျ့ဒသေကထှကျတဲ့သဃံဇာတနဲ့ ကိုယျ့စာပယေဉျကြေးမှုကို စီမံခနျ့ခှဲဖို့ တိုငျးရငျးသားတှကေ ဒီမိုကရစေီဖကျဒရယျအိမျမကျကို မကျလာကွတယျ။ ၂၀၁၅-ခုနှဈရှေးကောကျပှဲတုနျးက ရခိုငျနဲ့ရှမျးဒသေတှမှော ပွညျနယျဝနျကွီး ခြုပျတှကေို ဗဟိုအစိုးရက တိုကျရိုကျခနျ့ထားခဲ့ကွတော့ တိုငျးရငျးသားတှကေ Power Sharing ကို ဗဟိုအစိုးရနဲ့ပွညျနယျအစိုးရ အဖှဲ့တို့အကွား သဘောတူညီမှုရရှိဖို့အတှကျ ဖှဲ့စညျးအုပျခြုပျပုံအတိုငျးသှားဖို့ လိုလားနကွေခွငျးဖွဈပါတယျ။ ဖကျဒရယျဒီမိုကရေ စီနိုငျငံရေးစနဈကို အထောကျအကူပွုပေးနိုငျဖို့ အမြိုးသားတနျးတူရေးနဲ့ ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့ရှိနပေါရမှာဖွဈသလို ဒီမိုကရစေီဖကျဒရယျစနဈထှနျးကားဖို့ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒကေို မဖွဈမနပွေငျကိုပွငျရပါမယျ။
အခုခြိနျမှာ တိုငျးရငျးသားတှတေောငျးဆိုလာကွတာက ဖကျဒရယျစနဈရဲ့အနှဈသာရဖွဈတဲ့ ဗဟိုအစိုးရခြုပျကိုငျမှု အာဏာကို လြှော့ခပြွီး ပွညျနယျနဲ့တိုငျးဒသေကွီးတှကေ သဃံဇာတမြားအပျေါစီမံခနျ့ခှဲနိုငျခှငျ့ အပွညျ့အဝအာဏာခှဲဝမှေု ထူထောငျနိုငျဖို့ဖွဈပါတယျ။ ဗဟိုအစိုးရနဲ့ ဒသေန်တရအစိုးရအကွား အာဏာခှဲဝရေေးကိုတိုငျးရငျးသားတှကေ လိုခငျြနကွေလို့ ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီစနဈကို လိုခငျြလာကွခွငျးဖွဈပါတယျ။ ဒီမိုကရစေီလူ့အဖှဲ့အစညျးတှငျ ဖကျဒရယျစနဈယဉျကြေးမှု ထှနျးကားလာဖို့ သညျးခံမှုက အဓိကအခကျြဖွဈပွီး ဗိုလျကမြစိုးမိုးရေးကလညျး အခွခေံအကွောငျးရငျးတဈခုဖွဈနပေါတယျ။
တဈနေ့ “ဆရာတျောဦးဥတ်တမဟာ ရခိုငျလူမြိုးဖွဈရဲ့သားနဲ့ ဦးဥတ်တမနမှေ့ာ ဆရာတျောကို ပူဇျောခှငျ့ရဖို့ ကြောငျးတှဘော ကွောငျ့မပိတျတာလဲ ဖကွေီး” ဆိုပွီး ၂၀၁၉-ခုနှဈ (၈၀) ပွညျ့ ဆရာတျောဦးဥတ်တမနေ့ ကလေးတနျး (Grade-5) ကြောငျးတကျနေ တဲ့ သမီးလေးက မေးဖူးပါတယျ။ ဆရာတျောဟာ လူမြိုးစှဲ၊ ဒသေစှဲမရှိဘဲ နကျရှိုငျးသောပွညျထောငျစု စိတျဓာတျဖွငျ့ လှတျလပျရေး ကွိုးပမျးခဲ့သူဖွဈပွီး မွနျမာနိုငျငံအနှံ့ ကြေးရှာမြားအထိ နိုငျငံရေးမကျြစိဖှငျ့ပေးခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ ဆရာတျောကြေးဇူးကွောငျ့ ဒို့ဗမာ အစညျးအရုံးတှေ ပျေါပေါကျလာခဲ့ရလို့ ဦးဥတ်တမနမှေ့ာ မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးကြောငျးမပိတျတောငျမှ သမီးငယျတို့လို ရခိုငျမြိုးဆကျသဈလူငယျတှေ ဆရာတျောရဲ့ကြေးဇူးတရားသိတတျလာစဖေို့ ပူဇျောလို့ရအောငျ ရခိုငျပွညျနယျမှာ အခွခေံ ပညာကြောငျးတှေ ပိတျသငျ့ပါတယျ။ အခုက သညျလိုမဟုတျ စဈတှမွေို့ ဆရာတျောပနျးခွံရှိ ဦးဥတ်တမခနျးမမှာ ဦးဥတ်တမနပွေု့လုပျ ကငျြးပဖို့ ပှဲဦးဆောငျကငျြးပသူတှကေ ငွိမျးစုစီတငျခဲ့ကွရကွောငျး ကွားသိခဲ့ရပါတယျ။
စောဘဦးကွီးအမှတျတရ ကရငျအာဇာနညျနကေို့ ကငျြးပခှငျ့ပိတျပငျတာတှေ၊ ကရငျအာဇာနညျ စောဘဦးကွီးရုပျတုကို စိုကျထူခှငျ့မရခဲ့ကွတာတှေ၊ လှိုငျကျောမှာ ကယားပွညျသူတှမေလိုခငျြခဲ့ဘဲ ဗိုလျခြုပျရုပျတုစိုကျထူဖို့ ကွိုးစားခဲ့တာတှနေဲ့ ကခငျြလူမြိုးတှရေဲ့ ဒဏ်ဍာရီတှမြေားစှာရှိနတေဲ့ မွဈဆုံစီမံကိနျးကို အကောငျအထညျဖျောဆောငျဖို့ ကွိုးစားနတောတှကေ လူမြိုးကွီးဝါဒကို အခုခြိနျထိ စှဲကိုငျနကွေတုနျးလို့ တိုငျးရငျးသားတှကေထငျမှတျနကွေပွီး သူတို့ရဲ့ခံစားခကျြတှကေိုတော့ လဈြလြူရှုခွငျးဖွဈတယျလို့ ထငျမွငျနကွေပါတယျ။ တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ အန်တိမရညျမှနျးခကျြက အနာဂတျမှာ ဖွဈထှနျးလာမယျ့ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုတညျဆောကျရေးဟာ တိုငျးရငျးသားအားလုံးရဲ့လိုလားခကျြ၊ မြှျောလငျ့ခကျြဖွဈပါတယျ။ နောကျတဈခု က ခတျေအဆကျဆကျအုပျခြုပျခဲ့ကွတဲ့ အစိုးရအနဖွေငျ့ ပငျလုံကတိကဝတျကို အကောငျအထညျဖျောဆောငျနိုငျခွငျးမရှိခဲ့ကွလို့ တိုငျးရငျးသားတှကေ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုကို လိုလားကွခွငျးဖွဈပါတယျ။
ဗဟိုခြုပျကိုငျမှုလှမျးမိုးထားတဲ့ မွနျမာ့နိုငျငံရေးမှာ တိုငျးနဲ့ပွညျနယျတှရေဲ့ဆုံးဖွတျခကျြက ဗဟိုမှာပဲ ရှိနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီမိုကရစေီဖကျဒရယျပွညျထောငျစု တညျဆောကျရေးလုပျငနျးစဉျဖွဈတဲ့ အမြိုးသားတနျးတူရေးနဲ့ ကိုယျ့ကံကွမ်မာကိုယျ ဖနျတီးနိုငျဖို့ လကျနကျကိုငျလမျးစဉျသာ အမှနျဆုံးဖွဈတယျလို့ တိုငျးရငျးသားတှကေ ယုံကွညျခကျြထားလာနကွေခွငျးဖွဈပါ တယျ။
ပွညျထောငျစုမွနျမာနိုငျငံသားအားလုံး တနျးတူအခှငျ့အရေးရရှိရေးအတှကျ တိုငျးရငျးသားတှကေ ဖကျဒရယျစနဈသညျ သာ အခွခေံအကဆြုံးလို့ ရှုမွငျထားကွသလို တဈဖကျကလညျး ဖကျဒရယျဆိုတာ တိုငျးပွညျပွိုကှဲရေးစကားလုံးအဖွဈ မှတျယူထားပွီး လူမြိုးကွီးဝါဒကို အသဆေုတျကိုငျထားလို့ ကမ်ဘာပျေါမှာ အကွာဆုံးပွညျတှငျးစဈ နှဈပေါငျး(၇၀)ကြျော ရှိလာနရေ ခွငျးဖွဈပါတယျ။
အခုခြိနျမှာ NLD အစိုးရအနဖွေငျ့ အစိုးရ တိုငျးရငျးသားဒသေတှမှော ဗိုလျခြုပျရုပျထု စိုကျထူဖို့ ကွိုးစားနတောထကျ အမြိုးသားတနျးတူရေး၊ ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့ကို အခွခေံတဲ့ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစု ပျေါပေါကျရေးကိုသာ အမွနျဆုံးအကောငျ အထညျဖျောဆောငျသငျ့ပါတယျ။ ဖကျဒရယျစနဈတိုငျးမှာ သကျဆိုငျရာပွညျနယျမှာ ဥပဒပွေုခွငျး၊ မွို့တျောဝနျနဲ့ပွညျနယျဝနျကွီး ခြုပျ ရှေးခယျြခနျ့အပျခွငျးကို ပွညျနယျအစိုးရက လုပျဆောငျကွပါတယျ။ တူညီသောတနျးတူအခှငျ့အရေးမြားကို အာမခံတဲ့ ဗဟို ခြုပျကိုငျမှုလြှော့ခပြွီး ပွညျနယျအစိုးရမြားအုပျခြုပျရေးအာဏာ ပိုမိုပိုငျဆိုငျဖို့ တိုငျးရငျးသားတှလေိုခငျြနကွေတဲ့ ဖကျဒရယျစနဈကို အကောငျအထညျဖျောဆောငျရမှာဖွဈပါတယျ။
ခုခြိနျအမြိုးသားပွနျလညျသငျ့မွတျရေး လုပျဆောငျနခြေိနျကာလမှာ ဗိုလျခြုပျရုပျတုတှစေိုကျထူဖို့ ကွိုးစားနခွေငျးဟာ အကြိုးထကျအပွဈသာမြားနိုငျသလို အခွားတိုငျးရငျးသားတှနေဲ့ ဗမာတိုငျးရငျးသားမြားအကွား မလိုလားအပျတဲ့လူမြိုးရေးဆနျတဲ့ အမုနျးပှားမှုတှသော ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့တိုငျးရငျးသားတှကေ အမြိုးသားတနျးတူရေးနဲ့ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့ရဖို့ လကျနကျကိုငျလမျးစဉျကို စှဲကိုငျခဲ့ကွရာမှ ကမ်ဘာ့အရှညျဆုံးမွနျမာပွညျတှငျးစဈအဖွဈ နာမညျကွီးလာရခွငျးဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံတျောရဲ့အာဏာကို ဗဟိုက ခြုပျကိုငျထားပွီး တိုငျးရငျးသားဒသေတှမှော ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့၊ ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့မရှိတာ လညျး ပွညျတှငျးစဈဖွဈနရေခွငျးရဲ့ အဓိကအကွောငျးအရငျးတဈခုဖွဈနပေါတယျ။
ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီပွညျထောငျစုဖွဈလာဖို့ ငွိမျးခမျြးရေးလမျးစဉျအမွနျဆုံးအကောငျအထညျဖျောဆောငျကွရပါမယျ။ ကြောငျးသုံးပွဋ်ဌာနျးခကျြစာအုပျတှမှော အဒေီ ၁၀၄၄-ခုနှဈ ပုဂံသမိုငျးထဲက အနျောရထာ၊ ကနျြစဈသားမငျးအကွောငျးတှေ သငျကွားနသေလို အဒေီ ၁၄၃၀-ခုနှဈမှာ မွောကျဦးမွို့ကို စတငျတညျထောငျခဲ့တဲ့ မွောကျဦးခတျေက ရခိုငျဘုရငျ မငျးစောမှနျ၊ မငျးဗာဘုရငျအကွောငျးနဲ့ မှနျဘုရငျမနုဟာမငျး အကွောငျးတှကေိုလညျး ကြောငျးသုံးပွဋ်ဌာနျးခကျြစာအုပျတှမှော ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူတှသေငျကွားနိုငျဖို့ ပွဋ်ဌာနျးပေးသငျ့ပါတယျ။ ဒါမှလညျးဒီမိုကရစေီ အမြိုးသားတနျးတူရေးနဲ့ ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့အာမခံ ခကျြအပွညျ့အဝရှိပွီး ဒီမိုကရစေီနှငျ့ဖကျဒရယျစနဈကို အခွခေံသညျ့ ဒီမိုကရစေီဖကျဒရယျပွညျထောငျစု ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့အတိတျသမိုငျးကို မလိုခငျြသရှေ့ ဗမာတိုငျးရငျးသားတှနေဲ့အခွားတိုငျးရငျးသားတှအေကွားမှာ မုနျးတီးမှုတှေ ဆကျရှိနအေုံးမှာဖွဈလို့ ဒီမိုကရစေီဘောငျကဉျြးလာရငျ စဈဘောငျက ဆကျလကျကယျြနအေုံးမှာပါ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ပွညျထောငျစုဆိုတဲ့စကားလုံးကို အဓိပ်ပာယျဖျောဆောငျနကွေရာမှာ မတူကွဘူးဖွဈနတေယျ။ လကျနကျစှဲ ကိုငျနကွေတဲ့တိုငျးရငျးသားတှကေ နယျခြဲ့၊ ဖကျဆဈရနျကို တိုငျးရငျးသားပေါငျးစုံက တိုကျယူခဲ့လို့ လှတျလပျရေးရပွီးမှ ငါတို့အား လုံးပါဝငျပွီး ပွညျထောငျစုဖွဈလာတယျလို့ ယုံကွညျနကွေပမေဲ့ ဗမာတိုငျးရငျးသားတှကေ မွနျမာနိုငျငံဆိုတာ ပုဂံခတျေကတညျး က ရှိတယျလို့ ယုံကွညျထားကွတယျ။ ဒါကလညျးပွညျတှငျးစဈဖွဈနရေခွငျးရဲ့ အကွောငျးရငျးတဈခုပါ။ တိုငျးရငျးသားတှမေကျခဲ့ ကွတဲ့ ဒီမိုကရစေီဖကျဒရယျပွညျထောငျစုအိမျမကျကို အကောငျအထညျဖျောဆောငျနိုငျဖို့ ပုဂံခတျေကို လိုအပျသညျထကျ အမှမျးမတငျသငျ့။
ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီပွညျထောငျစုကို ဖျောဆောငျဖို့ကွနျ့ကွာနခေဲ့လို့ ဘယျသူမှအနိုငျအရှုံးမရှိ မဆုံးနိုငျတဲ့ ပဋိပက်ခသံသ ရာမှာ ကငျြလညျနကွေရတာကို အရှညျလြားဆုံးမွနျမာပွညျတှငျးစဈတိုကျပှဲတှကေ သကျသပွေလကျြရှိနပေါတယျ။ နိုငျငံလှတျလပျရေးနဲ့အတူပျေါပေါကျလာတဲ့ ပွညျတှငျးသဘောထားကှဲလှဲမှုတှကေို နိုငျငံရေးစားပှဲဝိုငျးမှာ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးအဖွေ ရှာကွခွငျးဖွငျ့ နှဈဘကျပွလေညျမှုတှေ ရှိလာနိုငျပါတယျ။ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ ရှဆေ့ကျဆောငျရှကျရမယျ့ လုပျငနျးစဉျတှေ ခြောမှလေ့ာရမညျဖွဈရာ ပွညျထောငျစုအကြိုး၊ တိုငျးရငျးသားပွညျသူတှအေကြိုးဖွဈမယျ့ ဘုံသဘောထားကို ခံယူထားကွရမှာလညျးဖွဈတယျ။
နိုငျငံရေးပွဿနာကို စဈရေးဖွငျ့မဖွရှေငျးကွဘဲ နိုငျငံရေးနညျးဖွငျ့ ဖွရှေငျးရမယျ့ နိုငျငံရေး ယဉျကြေးမှုအသဈကို တညျဆောကျနိုငျကွမှသာ တနျးတူရညျတူ အခှငျ့အရေးရရှိကွမယျ့ ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီပွညျထောငျစု တဈခုကို တညျဆောကျနိုငျကွမှာဖွဈပါတယျ။
NCA လကျမှတျထိုးပွီး အပဈခတျရပျစဲရုံနဲ့လညျး ဖကျဒရယျပွညျထောငျစု ဖွဈမလာနိုငျသေးပါ။ တရားမြှတမှုက အခွခေံနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ တရားမြှတမှု၊ တနျးတူအခှငျ့အရေးဆိုတာ ဖကျဒရယျဖွဈလို့ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးကို တိုငျးရငျးသား တှကေ မြားစှာလိုခငျြနကွေခွငျးဖွဈပါတယျ။ တိုငျးရငျးသားတှလေိုခငျြနကွေတဲ့ ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီကို မသိကြိုးကြှံပွုထားသမြှ ကာလပတျလုံး ပွညျတှငျးစဈဘယျတော့မှ ခြုပျငွိမျးမှာ မဟုတျပါဘူး။
မွနျမာနိုငျငံမှာ အခုလိုပွညျတှငျးစဈဘာကွောငျ့ ကွနျ့ကွာနရေသလဲဆိုရငျ တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ဖကျဒရယျပွညျထောငျစု အိမျမကျဆန်ဒကို အုပျခြုပျခဲ့တဲ့အစိုးရအဆကျဆကျ ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျမှု မြားစှာအားနညျးနခေဲ့လို့ပဲ ဆိုရပါမယျ။ လှတျတျောက ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံပွငျဆငျရေး (၄၅)ဦးကျောမတီမှာ ရခိုငျကလှတျတျောအမတျတှေ နှုတျထှကျလိုကျကွခွငျးနဲ့ပတျသကျပွီး ရခိုငျအမြိုးသားပါတီက “စဈမှနျသော ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုတညျဆောကျရေးအခနျးကဏ်ဍမှာ ပီပွငျစှာပါဝငျနိုငျရနျ အခွအေနေ မရှိတော့တဲ့အပွငျ ဗဟိုခြုပျကိုငျမှုစနဈကငျြ့သုံးပွီး လကျရှိအာဏာရပါတီရဲ့ အာဏာာတညျမွဲရေးကိုသာ ရညျရှယျနကွေောငျး တှမွေ့ငျနရေလို့” ဆိုပွီး ထညျ့သှငျးဖျောပွထားတာကို ဖတျလိုကျရပါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒကေို ပွငျဆငျဖို့ ကွိုးစားလာနကွေခွငျးဟာ အဆိုးထဲက အကောငျးတဈခုလို့ ဆိုရပါမယျ။
ကမ်ဘာကွီးရှာတဈရှာဖွဈလာနခြေိနျမှာ တိုငျးရငျးသားတှကေ ခတျေကိုလိုကျပွီး ပွောငျးခငျြလာကွပါတယျ။ ရခိုငျလူမြိုးတှေ ရဲ့အမွငျမှာ ၁၈၈၅-ခုနှဈကတညျးက သူ့ကြှနျဖွဈခဲ့ရတာ ဗဟိုခြုပျကိုငျမှုစနဈက ရှိသေးလို့ အခုအခြိနျထိ ငါတို့ တနျးတူအခှငျ့အရေး မရသေး၊ ကြှနျနဲ့မခွား။ ဒါကွောငျ့ ငါတို့လကျနကျစှဲကိုငျမှ ရတော့မယျဆိုပွီး ရခိုငျလူငယျတှေ သနေတျကိုငျ တာကို ခုံမငျလာနကွေခွငျးဖွဈပါတယျ။
တိုငျးရငျးသားတှအေနဖွေငျ့ ဖကျဒရယျနဲ့ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ကို အစဉျတစိုကျတောငျးဆိုလာခဲ့ကွတာ တှမွေ့ငျနရေပါ တယျ။ အမြိုးသားတနျးတူရေးနဲ့ တနျးတူညီမြှ ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့ရှိလာဖို့ AA မှ စဈဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျထှနျးမွတျနိုငျက “ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ဒသေထကျ မညံ့တဲ့ ကှနျဖကျဒရေးရှငျး ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ကို လိုခငျြတယျ” လို့ ဧရာဝတီသတငျးဌာနနဲ့ အငျတာဗြူးလုပျခြိနျမှာ ဖွကွေားသှားတာတှလေို့ကျရပါသေးတယျ။
အရငျကလညျး ရခိုငျပွညျနယျမှာ ခတျေအဆကျဆကျ ရခိုငျ့တျောလှနျရေးခေါငျးဆောငျမြား ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ကို တောငျးဆိုခဲ့ကွတာ တှမွေ့ငျခဲ့ရပါတယျ။ ၁၉၆၃-ခုနှဈ ပွညျထောငျစုမွနျမာနိုငျငံတျောလှနျရေးကောငျစီက ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြး ရေးပွနျလညျတညျဆောကျနိုငျဖို့ တောတှငျးလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးဖွဈတဲ့ ရခိုငျပွညျနယျကှနျမွူနဈပါတီနဲ့ ဆှေးနှေးခဲ့ရာ ရဲနီကြျောဇံရှီက ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့တောငျးဆိုခဲ့တာကို ကွားသိရပါတယျ။ “ရှမျးမူ” မပျေါခငျ ဦးထှနျးမွငျ့ရဲ့စာတမျးမှာလညျး ခှဲထှကျလိုက ခှဲထှကျခှငျ့ဆိုတဲ့ အခကျြတဈခကျြပါရှိနတောကို သတိပွုမိပါတယျ။
အမှနျက တိုငျးရငျးသားတှေ လိုခငျြနကွေတဲ့ ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီပွညျထောငျစုဆိုတာ ခှဲထှကျရေးမဟုတျ၊ ဗဟိုခြုပျကိုငျမှုလြှော့ခထြားတဲ့ ဖကျဒရယျစနဈသာဖွဈပါတယျ။ ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီရဲ့အနှဈသာရပါတဲ့ စကားလုံးတှနေဲ့ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေး မဆှေးနှေးနိုငျသမြှ TNLA မှ ဗိုလျမှူးခြုပျ ဘုနျးကြျော ပွောသလို “မွနျမာ့ပွညျတှငျးစဈ နှဈတရာမက မပွီးဆုံးသော သံသရာ” ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။
အခြုပျအားဖွငျ့ပွောရပါလြှငျ ပွညျတှငျးစဈခြုပျငွိမျးသှားဖို့ တိုငျးရငျးသားတှေ အစဉျတစိုကျတောငျးဆိုလာကွတဲ့ ဒီမိုကရစေီဖကျဒရယျပွညျထောငျစုစနဈကို ဦးတညျပွီး ခိုငျခိုငျမာမာ အကောငျအထညျဖျောကွဖို့ လိုအပျနသေလို တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ သမိုငျးကွောငျး အဖွဈအပကျြတှကေို အသိအမှတျပွု တနျဖိုးထားပေးရပါမယျ။ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ နိုငျငံရေး ဆှေးနှေးပှဲ၊ စာပှဲဝိုငျးက တဈဆငျ့ အမြိုးသားတနျးတူရေး၊ ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့နဲ့ အာဏာခှဲဝမှေုအတှကျ ဗဟိုခြုပျကိုငျမှု လြှော့ခနြိုငျမှသာ ဒီမိုကရစေီဖကျဒရယျပွညျထောငျစုဖွဈအောငျ ထူထောငျမယျဆိုရငျ ဖှဲ့စညျးပုံကို မပွငျမဖွဈ ကွိုးစားကွရပါမယျ။ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံထဲမှာ ပွငျဆငျမယျ့ ပုဒျမတှကေလညျး တိုငျးရငျးသားအားလုံးလကျခံနိုငျမယျ့ ပုဒျမတှေ ထညျ့သှငျးလာနိုငျပါစလေို့ မြှျောလငျ့ရငျး . . . ။